Balashikha - a edolobheni esifundeni laseMoscow, okuyinto etholakala eduze eMoscow Ring Road. Babalelwa ku-ke kukhona izindlu ezindala kanye amapaki: Gorenki, Pehra-Yakovlevskoye, zintathu Kaynardzha, Pehra-Pokrovskoye. Sibonga i inhlanganisela ezithakazelisayo bemvelo amahle izikhumbuzo zomlando, umuzi kufanele isihloko 'Iparele esifundeni eMoscow. " Wayevame wavakashela yizivakashi, ngakho kulesi sihloko sizohlola emahhotela oyisilomo Balashikha.
Ihhotela "Induduzo" (Balashikha) inikeza izivakashi zalo amakamelo ukhululekile ngamanani aphansi. Kuleli qophelo uzoba ukuhlala ukuhlala isikhathi eside, kanye amahora ambalwa - kulula kakhulu ngabantu ayedlula phakathi komuzi. abasebenzi Leli hhotela angakwazi ukusiza izivakashi e nemidanti abasafufusa, kuhlanganise namalungiselelo yokudlulisa.
Izindleko zokuphila: kusukela 2800 ruble / ngosuku ..
Ihhotela "Lilac" yakhoselisa ngo 2007. Itholakala kwi Shchelkovo onguthelawayeka cottage. Kusuka lapha ungakwazi emizuzwini engu-15 ukufinyelela "Shchelkovskaya" esiteshini.
Ihhotela itholakala endaweni eluhlaza, eduze kwepaki Elk Island. It unikeza yokuhlala kumagumbi ekhululekile ezahlukene izigaba intengo, yilowo nalowo kubo ifakwe TV, ifenisha ukhululekile. Izihambeli zalo ehhotela Balashikha ezishibhile idili ehholo abantu amane. Esikhathini isikhungo liphinde kuqashelwe car park.
Izindleko: kusukela 3200 deda / ngosuku ..
Izwe Inxanxathela "Artilend"
Le mpahla emaphandleni uphelele abathandi ehlanzekile emoyeni, induduzo ukuthula. Kule ndawo ungakhululeka okumatasa kwedolobha elikhulu. Yekamelo lehhotela umthamo kuhlanganisa amakamelo 47 futhi Suites - kusukela ezejwayelekile Suites zikanokusho nge ithala yangasese kanye emnyango ehlukile. Ifenisha yesimanje futhi ukhululekile, izivakashi kuyodingeka ukuphumula okuhle futhi lulama. Ukuze izivakashi yehhotela Balashikha ihlinzeka yokudlela gourmet, omkhulu okugeza eziyinkimbinkimbi, 2 amagumbi. Kuleli qophelo, ungaya ukudoba noma ube epikinikini. Uma lapha okungenani kanye, uyofuna ngibuye.
Izindleko zokuphila: kusukela 2400 ruble / ngosuku ..
East Gate Ihhotela
Ihhotela itholakala enkabeni yedolobha, eduze ihlathi, e indawo eyeseka ngokuya ngemvelo. Ngaphambi eMoscow Ring Road ibanga 5 amakhilomitha futhi eMoscow city centre - 15 amakhilomitha. Ukuze bafike kulesi ehhotela Balashikha elula ngoba uza lapha minibuses 18. Izivakashi nethuba ukusizakala full-service izikhungo, ngaphezu, izinkonzo dispenser, okuyinto etholakala lapha.
Izindleko: kusukela 2400 deda / ngosuku ..
Ihhotela "Ezemidlalo", Balashikha
Itholakala edolobheni Balashikha ku labasubathi. Ngo isakhiwo kukhona 7 amakamelo cozy ezahlukene amanani. Igumbi ngalinye has: imibhede ne eliseceleni kombhede amatafula, yokugezela kanye yangasese, edeskini, ikhabethe, i-TV. Izivakashi zehhotela Ungasebenzisa i-Inthanethi, kanye namasevisi olunikezwa club.
Izindleko: kusukela 2600 deda / ngosuku ..
Ihhotela: "Nkosi Ihhotela"
Ihhotela imayelana Novokosino Station, 3.6 amakhilomitha of onguthelawayeka kusuka eMoscow Nosovihinskoe. It inikeza izivakashi yokuhlala ukhululekile futhi ethokomele esimweni eyingqayizivele ngempela ekhaya induduzo. Abasebenzi friendly futhi anake enakekela iwashi ngokunganaki ukuhlala izivakashi, ne amanani ezingabizi ziyojabula. Esitezi 1st ehhotela kukhona yokudlela Balashikha. Kufanele kuqashelwe ukuthi kuhle isakhiwo ayihlomele futhi yesimanje, lapho ungakwazi ukuya eKursk sesitimela imizuzu engu-15 nje. Domodedovo Airport ingamakhilomitha angu-48 ukusuka.
Izindleko: kusukela 3600 deda / ngosuku ..
Lokhu ehostela itholakala ekotishi eduze esiteshini Nikolskoye. Insimu yalo kufanele khulula Ukufinyelela i-Inthanethi. Uma uza lapha ngemoto, at service yakho yokupaka iyatholakala. Amakamelo ehostela Akubhenywa. Zonke amakamelo en suite zangasese. Banezinhliziyo zika, eshaweni, zokugeza, yangasese.
Izindleko: kusukela 3000 deda / ngosuku ..
"ArtiLend" - ehhotela club-hlobo, esemgwaqweni ogwini ichibi Balashikha. I MKAD ingamakhilomitha angu-12. Izivakashi bamenyiwe ukuhlala induduzo ejwayelekile aphakeme amakamelo ne amawindi omkhulu. I amakamelo TV yesimanje, izihlambi noma izindlu zokugezela, imishini ngokwenza yini ikhofi noma itiye ukwenziwa izindawo, ibha mini, air conditioning.
Izindleko: kusukela ngo-1900 deda / ngosuku ..
Ihhotela "Revital Park"
Sise ibanga amakhilomitha 11 kusuka eMoscow. Budebuduze kukhona umgwaqo ovulekile M7 futhi Gorky onguthelawayeka. Babalelwa ku-55 amakhilomitha yebanga ukuze Domodedovo. Ngo isikhungo yokudlela nge wezokudla, Russian kanye zaseYurophu amamenyu, studio zezingane, okuyinto elibamba amaseshini ezemfundo, kanye ibha izithelo.
Ihhotela "uMarian Hall"
Ihhotela itholakala Balashikha eduze eMoscow. Kuphela amakhilomitha 4 lapha uye esikhumulweni sezindiza Sheremetyevo. Vala - "Shchelkovo" shopping centre. Station "Shchelkovo" nje amakhilomitha 4 kusukela ehhotela. Izivakashi ethokomele yokuhlala izigaba ziyatholakala yokuhlala "ejwayelekile", "okunethezeka" futhi "Junior."
Croatia Amahhotela Abavakashi
Ihhotela Soviva kuyona 4 * (Tunis, Sousse, Port El Kantaoui): incazelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Amahhotela eshibhile e Yaroslavl: izibuyekezo, izilinganiso
Esakhelwe ngaphakathi Isihleli sesibalo e-MS Word
Kanjani ukuze ajabulise indoda nge-SMS? SMS yezocansi: Izibonelo
I-Biography ka-Friedrich Schiller - enye yezingoma zabo zokudlala ezinhle emlandweni waseJalimane